Vohitr’i Ségou: Fitsidihana Amin’ny Lakana Ny Reniranon’i Niger Ho Fampahafantarana Ny Aterineto · Global Voices teny Malagasy
Vohitr'i Ségou: Fitsidihana Amin'ny Lakana Ny Reniranon'i Niger Ho Fampahafantarana Ny Aterineto
Voadika ny 27 Janoary 2012 0:44 GMT
Mandray lalana mahaliana ny tetikasa Ségou Villages Connection any Mali, iarahana aminà tetikasan'ny UNESCO ho fitandroana ny lova [fr]. Boukary Konaté, mpandray anjara iray nahazo fanohanana avy amin'ny Rising Voices 2011, amin'izao fotoana izao dia miampita ny Reniranon'i Niger anatinà lakana Maliana nentin-drazana, mifindrafindra vohitra iray hafa isanandro mba hampianatra ireo ankizy sy ireo mponina ny fomba fampiasa ny Aterineto.
Ilay lakan'ny Laminasan'ny UNESCO Loire-Nizer
Mamory sy mitahiry ireo lova ara-kolontsaina navelan'ny Renirano Nizeriana, anatin'izany ireo mpanjono sy ireo mponina ao amin'io vohitra io, ny Laminasa Reniranon'i Loire-Nizer [fr] izay tohanan'ny UNESCO-Frantsa sy ny Filan-kevi-paritry ny Pays de Loire. Fitetezana ireo tanàna ao anatin'ny tapa-bolana no nokarakaraina mba hanehoana fampirantiana sarinà fivezivezena anatinà lakana Maliana nentin-drazana. Nasaina hiaraka amin'ny ekipa mba hanitatra ny tetikasa amin'ny fampianarana ireo ankizy mpianatra ny Aterineto mandritra izany fotoana izany ny tetikasa Ségou Villages Connection. Anatin'ilay lakana i Boukary Konaté amin'izao fotoana izao ary mamoaka sary sady mandefa ny tantara mikasika ny zotran'ny tetikasa.
Any Sekoro, tanànan'ireo mpanjono, renivohitry ny Fanjakan'i Bamana teo aloha, tsy mbola nisy na iray aza naheno izany atao hoe Aterineto izany na nahita solosaina. Amin'ny lafiny iray koa, tsy misy jiro any an-toerana. Nampianatra ireo ankizy ny fomba fikarohana ao amin'ny Aterineto tamin'ny alàlan'ny solosainy findainy mandeha amin'ny herin'ny masoandro sy ny smartphone i Boukary Kounaté. Nihanahana izy ireo nahita fa afaka mahazo fahalàlana ianao na tsy mandeha na aiza na aiza aza: io no misolo toerana ano mivezivezy, amin'ny alàlan'ny Aterineto” hoy izy. Nisy zazavavy kely iray (ity azo sary eto ambany ity) tsy nisalasala na segondra iray aza rehefa nanontaniana ny zavatra tiany ho fantatra: ny “C.A.N.” (Fiadiana ny Tompon-dakan'i Afrika amin'ny lalao baolina kitra 2012).
Zazavavy kely mpianatra amin'ny ambaratonga voalohany izay sambany mba manindry ny bokotra "mampiditra" , any Sekoro, Mali
Any amin'ny faritra ambonin'i Nizer, any amin'ny renivohi-paritr'i Segou, nanome famelabelarana momba ny fahalalàna sy ny fiaraha-miasa omen'ny Aterineto i Boukary Konaté tao amin'ny lisean'ny Bandjougou Bouaré, nanoloana mpianatra mihoatra ny zato. Avy eo ireo mpianatra ireo dia nasaina nikaroka irery tao amin'ny Google, momba ny fotokevitra mahaliana azy manokana. Ireto misy fikarohana vitsivitsy notehirizin'i Boukary: “Ahoana ny fomba ahitana ny “racine carrée”-n'ireo isa tsy azo zaraina”, ‘Ny fiainana sy ny zava-bitan'i Keita, mpanjakan'ny Fanjakan'i Mangingo“, “Ireo boky nosoratan'ny mpanoratra Maliana Issa Baba Traoré“; “Ny mombamomba an'i Shaka Zulu, mpiady mahery fo indrindra tany Afrika Atsimo.” “(mpanakanto Pop) Rihanna“. Ary ny iray tamin'ireo mpampianatra kosa dia nikaroka ireo tantara mitohy TV “Prison Break“.
I Boukary manofana ireo mpianatry ny lisea any Ségou hikaroka amin'ny Aterineto
Nahazo fampianarana avy amin'ireo andianà fanofanana natao taloha tany amin'ny faritr'i Ségou nokarakarain'ny Ségou Villages Connection, mandehandeha miaraka amina USB misy aterineto mba hahazoany fahafahana miditra amin'ny aterineto, ary “chargeur” mandeha amin'ny herin'ny masoandro mba hamenoany ny tanjaky ny laptop sy ny smartphone-ny i Boukary. Hitany fa vahaolana miharihary sy mahafa-po izany amin'ny fifandraisana amin'ireo toerana lavitra, ary dia mahavita mitoraka bilaogy eny amin'ny Reniranon'i Niger mihitsy aza! Afaka manaraka ny vaovao avoakan'i Boukary Konaté isanandro sy ireo sary ao amin'ny Facebook ianao.
Mitoraka bilaogy eo amin'ny tetezan'ny lakana , eny amin'ny Reniranon'i Niger
Ireo sary rehetra nalain'i Boukary Konaté sy ny ekipa, ampiantranoin'ny kaontin'i riconcella, dia naverina novokarina teo ambanin'ny Creative Commons License.